YEYINTNGE(CANADA): OHSAS 18001 (အိုရှား အိတ်တီးန်သောင်ဇင်ဝမ်း)
OHSAS 18001 (အိုရှား အိတ်တီးန်သောင်ဇင်ဝမ်း)
by Aye Nyein (Notes) on Monday, March 18, 2013 at 10:56am (၁)
အမှန်က သည်အကြောင်းကို ကျွန်တော်အခုရေးဘို့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မနေ့ညအိပ်စဉ် သည်အကြောင်းက အိပ်ခြင်းကို အနှောက်အယှက်ပြုနေသဖြင့် နောက်ညများတွင် ဆက်အိပ်ရေးမပျက်ရလေအောင် ချက်ချင်းရေးရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
အကြောင်းကား ကျွန်တော် လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာကို အနည်းငယ်မျှ ဝေဖန်ပြသည့်အခါ ဖေ့စ်ဘွတ် မိတ်ဆွေအတော်များများက ပြန်လည်ရှယ်တာ တွေ့ရ၏။ ထိုအထဲတွင်မှ ISO 9001, ISO 14001 နှင့် OHSAS 18001 အကြောင်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြတာ တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် စာဖတ်သူတစ်ယောက်က အောက်ပါအတိုင်း ပြန်မေးလာ၏။
ကျွန်တော်ရေးထားသည့်အထဲတွင် “ISO 14001, ISO 9001 တို့ကိုမူ နားလည်ချင် လည်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် လက်တွေ့ဗဟုသုတမရှိဘဲနှင့် OHSAS 18001 ကို နားလည်ပါမည်လား ဟု ရေးထားသည်။ စာရွက်စာတမ်းများအရမူ ISO 9001, ISO14001 နှင့် OHSAS18001 တို့မှာ အတူတူသာဖြစ်သောကြောင့် ISO 14001 နှင့် ISO 9001 တို့ကို နားလည်သူ တစ်ဦးသည် အဘယ်ကြောင့် OHSAS 18001 ကို နားမလည်ရပါမည့်အကြောင်း” ရှင်းလင်းပြောပြပေးပါ ဟု ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် အခြားသူများလည်း သူကဲ့သို့ပင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မည့်သူများ၊ သို့မဟုတ် သည် ISO standards များကို လုံးဝ မသိသေးသူများ အများအပြားရှိနိုင်သဖြင့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများအား သည်အကြောင်းမှ မရှင်းပြရလျှင် ကျွန်တော် အိပ်ပျော်မည်မဟုတ်သောကြောင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ဘေးချိတ်လျှက် ယခု ချက်ချင်းလက်ငင်း ကောက်ကက် ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသတည်း။
“အပိုဒ် ၆၃ တွင် အစီရင်ခံစာက ထိုစီမံကိန်းသည် ISO 14001, ISO 9001 နှင့် OHSAS 18001 တို့ကို ရရှိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည် ဟု ဖော်ပြထားသည်ကိုမူ (သည်လက်ပံတောင်းတောင်သို့ ကျွန်တော် တစ်ခေါက်မှ မရောက်ခဲ့ဖူး စေကာမူ) ငါးသလောက်ပြုံး ပြုံးလိုက်ချင်ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် OSHAS 18001 အတိုင်း လုပ်နေပါသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အပြည့်အ၀ ကျင့်သုံးနေပါသည် ဟု ပြောသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၏။”
- ဟု ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါသည်။ သည်ကဲ့သို့ရေးခြင်းမှာ စုံစမ်းရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို သရော်လိုသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ တရုတ်ပြည်ကို အထင်သေးသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်လည်းဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘဲလျှက် သူများလုပ်တာကို နှာခေါင်းရှုံ့လိုသောကြောင့်လည်းကောင်း မဟုတ်ရပါခင်ဗျား။
OHSAS 18001 ဆိုတာ ဘာ ဆိုတာကို ကျွန်တော် (အဲလေ ကျွန်တော်တင်မဟုတ်ပါ။ စင်ကာပူတွင် Safety Officer အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာ ၄၀ ကျော်) ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ သိသောကြောင့်သာ ငါးသလောက်ပြုံး ပြုံးချင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ OHSAS 18001 ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဘို့ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် အတော့်ကို မလွယ်သော ကိစ္စဖြစ်ပါ၏။ ထိုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော စူပါစထရပ်ချာ၊ အင်ဖရာစထရပ်ချာ (သည်းခံပါခင်ဗျား။ အပေါ်ထပ်အဆောက်အအုံ ဟု ဘာသာပြန်လိုက်လျှင် မသိသူများအတွက် မလိုလားအပ်သောအတွေးလွဲများ ဖြစ်သွားမည်စိုးသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကို အသံလှယ်သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကား စကားချပ်။) ပြည့်စုံရသည်။ သည်အရာများမရှိဘဲ မည်သည့်နည်းနှင့်မှ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ Safety နှင့်ပတ်သက်သည့် စူပါစထရပ်ချာ၊ အင်ဖရာစထရပ်ချာ ဘာတစ်ခုမှမရှိပါ။ သို့ဆိုလျှင် သည်အရာများမရှိပါဘဲလျှက် မည်သည့်နည်းနှင့် OHSAS 18001 ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်နည်း။
(အဲလေ၊ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နှင့်တော့ အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရချင်ရပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခု စင်ကာပူသို့ အလည်ရောက်နေသည့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေပြောပြသည်မှာ သွားလေသူဝန်ကြီးတစ်ပါးလက်ထက်တွင် ၀န်ကြီးက အပင်များစိမ်းနေမှ သဘောကျသည်ဆိုသဖြင့် သူလာမည့်နေ့ကို တစ်ရက်ကြိုကာ ၀ါတာကာလာ (ရေဆေး) အစိမ်းများ ရေဖျော်ပြီး အပင်များကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပုံးဖြင့် ဖြန်းလျှက် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ခဲ့ရဖူးသည်ဆိုသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလောက် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များတာ ဘာလူမျိုးရှိပါသေးသနည်း။ သို့မို့ကြောင့် မြန်မာ့နည်း၊ မြန်မာ့ဟန်နှင့် သည် ISO ဆိုတာကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်ပြလိုက်လျှင်တော့လည်း မပြောတတ်ပါဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်၏။) ဒါတောင် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ကျုပ်တို့မှာဗျာ၊ ၀န်ကြီးလာနေတုံး မိုးရွာမချလိုက်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ရတာ အမော။ လူတွေ့ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဟု ပြောလိုက်ပါသေး၏။
သို့ဆိုလျှင် သည် OHSAS 18001 ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေများကို အရိပ်အမြွက် ရှင်းလင်းပြပါမည်။ သို့မှသာ မိတ်ဆွေများအနေနှင့် သည်ဟာကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်ဘို့ ဘာတွေလိုတယ်ဆိုတာ ရိပ်မိမည်ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော်လည်း ယခု အရိပ်အမြွက်အဖြစ် အနည်းငယ်မျှသာ ပြောပြမှာဖြစ်ပါသည်။ နောက်နှစ်လောက်ကျမှ စာတစ်အုပ်လုံး အပြည့်အစုံ၊ အထောက်အကူ၊ နမူနာများနှင့် ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
သို့သော် တစ်ခုတော့ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသော Total ကဲ့သို့၊ DNV ကဲ့သို့ ဥရောပနှင့် အနောက်နိုင်ငံများမှ ကုမ္ပဏီကြီးများကတော့ သူတို့စနစ်နှင့်သူတုိ့ ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကတော့ နိုင်ငံခြားမှ အောဒစ် (Safety Audit - လုပ်ငန်းစစ်) များခေါ်ကာ စစ်သည်ဆို၏။ ထိုအောဒစ်များထဲတွင် စင်ကာပူအောဒစ်များလည်း ပါသည်ဆို၏။ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါ။ သို့သော်လည်း ၀မ်ပေါင်ကိုတော့ ကျွန်တော်မထင်ပါ။
မြန်မာပြည်မှ ၀မ်ပေါင်ကို မဆိုထားပါနှင့်။ စင်ကာပူတွင် လက်ရှိကျွန်တော်ကိုင်နေသည့် Kallang Bahru Complex Project မှ တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်ပင်လျှင် ကိုင်ရတွယ်ရ အလွန်ခက်ပါသည်။ SubCon ၁၆ ခုရှိသည့်အနက် ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခ အပေးဆုံးမှာ Chan Rong Fen ဟုခေါ်သော ထိုတရုတ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်၏။ ဤကဲ့သို့လုပ်မှုကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့သည့် လေးလခန့် က ကုလားတစ်ယောက် သုံးထပ်မှ ပြုတ်ကျသေခဲ့သေးသည်။
အပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ကိုမေးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်လေး ပြောသကဲ့သို့ ISO (International Organization for Standardization) Standard အရ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူနားလည်စေရန် ကျွန်တော်က စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်ပင် တူသော်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူကြောင်းကို ခပ်လွယ်လွယ် အောက်ပါ အတိုင်းရှင်းပြလိုက်၏။
ငါးတန်းတွင်လည်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ ပါသည်။ ဆယ်တန်းတွင်လည်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ သင်ရသည်။ ဘာသာရပ်အားဖြင့်တော့ အတူတူပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် ငါးတန်းတွင်ပြဌာန်းထားသော မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ နှင့် ဆယ်တန်းတွင် ပြဌာန်းထားသော မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာတို့မတူသလိုပင် ISO 14001 နှင့် OHSAS 18001 တို့ မာတိကာပင်တူသော်လည်း အထဲတွင်ပါသော စာများမတူပါ ဟု ရှင်းပြလိုက်ပါသည်။ အမှန်က ဤဥပမာသည်လည်း သိပ်တော့မဟန်လှပါ။ တန်းတူချင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြမှ ပိုသဘာဝကျလိမ့်မည်။
ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြရလျှင် လူတွင်လည်း ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေ တို့ရှိသည်။ ခွေးတွင်လည်း ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေ တို့ရှိသည်။ ဆင်တွင်လည်း ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေတို့ရှိသည်။ သို့သော် လူတွင်ရှိသော ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေ။ ခွေးတွင်ရှိသော ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေ။ ဆင်တစ်ကောင်တွင်ရှိသော ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေတို့ တူနိုင်ပါမည်လော။ ISO 14001 နှင့် OHSAS 18001တို့ မတူပုံမှာလည်း ဤနည်းအတိုင်း ဖြစ်၏။
ISO 14001 နှင့် OHSAS18001 တို့၏ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို မူရင်းအတိုင်း အောက်တွင် ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်ပါသည်။
ထိုဇယားတွင်ကြည့်လျှင် ၎င်းstandardသုံးခုလုံး၏ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ပါ လိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုပင်လျှင် အင်တာနေရှင်နယ် စတင်းဒတ်ဟု ခေါ်သတည်း။ (ထုပ်လျောက်ဒိုင်းမြားတွေတိုင်းတော့ ပေ၊ လက်မနဲ့တိုင်းပြီး ကွန်ကရစ်မှာတော့ မီတာကျူနဲ့မှာသည့် စတင်းဒတ်သမားများ အတုယူစရာကောင်းပါသည်။)
အထက်တွင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ISO 14001 မှာလည်း ပေါ်လစီပါသည်။ OHSAS 18001 မှာလည်း ပေါ်လစီ ပါ သည်။ သို့သော် ပေါ်လစီချင်းမတူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ISO 14001 က ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း ဖြစ်ပြီး၊ OHSAS 18001 က ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
OHSAS 18001 စာအုပ် မရေးရသေးခင် သိချင်အရင်လိုသူများ ကျွန်တော့်ထံ လက်တို့လိုက်ပါ။ သည်စာအုပ်နှင့် သဘောသွားခြင်းတူသော စာအုပ်တစ်အုပ် ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတာ ရှိပါသည်။ ASEAN OSHMS for SME စာအုပ် ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း တခြားရေးစရာ အများအပြားရှိသဖြင့် စာအုပ်ကိုပဲ ဘာသာပြန်ပြီး နောက်ဆက်တွဲဇယားများကိုတော့ ဘာသာမပြန်ရသေးပါ။ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်လိုက်လျှင် Safety Management System အကြောင်း အတော်သဘောပေါက် သွားပါလိမ့်မည်။
(၄) OHSAS 18001 ဟူသည် အဘယ်နည်း
OHSAS 18000 ဟူသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (International Occupational Health and Safety Management System) ဖြစ်၏။ ၎င်းတွင် OHSAS 18001 နှင့် OHSAS 18002 ဟု အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါသည်။ ထို့ပြင် သူနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော အခြားစာစောင် အများအပြားလည်း ရှိပါသေးသည်။
OHSAS18001 ဟူသည် Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements ဖြစ်သည်။ OHSAS 18001 က လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး နှင့် အန္တရာယ် ကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အစစ်ဆေးခံနိုင်သည်။
ထိုစနစ်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အရာများကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်ကြီးတွင် နာမည်တစ်လုံးသည် အလွန် အရေးကြီးပေရာ ပရောဂျက်ကြီးများ ရနိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည် လုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေး ကို မည်မျှအလေးထားကြောင်း ပြသရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများသည် OHSAS 18001 လက်မှတ်ကို ရယူထားကြသည်။
(၅) OHSAS 18002 ဟူသည် အဘယ်နည်း
(၆) မည်သူများက သည်စနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ပါသနည်း
သည်စနစ်ကို တီထွင်တာ တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်း မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း၊ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ရှေ့ဆောင် အမျိုးသားစံနှုန်းပြုရေးအဖွဲ့များ၊ လက်မှတ်ပေးသောအဖွဲ့များ၊ အထူးအကြံပေးအဖွဲ့များ စုပေါင်းတီထွင်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအဖွဲ့များမှာ -
* National Standards Authority of Ireland * Standards Australia * South African Bureau of Standards * British Standards Institution * Bureau Veritas Quality International * Det Norske Veritas * Lloyds Register Quality Assurance * National Quality Assurance
* SFS Certification * SGS Yarsley International Certification Services * Asociaci?spa? de Normalizaci? Certificaci?r * International Safety Management Organisation Ltd * Standards and Industry Research Institute of Malaysia * International Certification Services
(၇) လိုက်နာကျင့်သုံးသော ကုမ္ပဏီများအား သည်စနစ်က မည်ကဲ့သို့ ကူညီနိုင်သနည်း
ဤစနစ်ကို အောက်ပါ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သည်။
v မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်းများ၊ မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် ကြုံတွေ့ရမည့် အန္တရာယ်များကို ဖျောက်ပစ်ရန် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်လျှော့ချလိုသော ကုမ္ပဏီများ
v မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေးမူဝါဒများကို ချမှတ်ထားသော ဥပဒေ များနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်လိုသော အဖွဲ့အစည်းများ
v မိမိတို့ ဤကဲ့သို့ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ပြသလိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
v မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်း ထားခြင်းနှင့် ပိုမိုတိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
v မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ မှတ်ပုံတင်များ၊ လက်မှတ်များ ရယူလိုသော အဖွဲ့အစည်းများ
မျက်စိတွေ ညောင်းလာလို့ နားလိုက်ဦးမဗျ။
၁၈ - ၃ - ၂၀၁၃။ ည ၁၀ နာရီခွဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/18/2013
the medal of Grand Officer of the Order of the Cro...
ဘူတာတွင် ရဟန်းတော် တစ်ပါး အရိုက်ခံရ
၉၆၉ စတစ်ကာများ ကို မူစလင်များ အသုံးပြု
ပန်းရဲ့လမ်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတအဖွဲ့ လိုင်ဇာအဝင် မိ...
တပ်မတော်၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော သတင်းအချက်များ မပေါက်ကြ...